Phenylpriracetam (Carphedon) ntụ ntụ (77472-70-9) ≥98% | Ndị na-emepụta
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Phenylpiracetam (Carphedon) ntụ ntụ
Rating: SKU: 77472-70-9. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na nchịkọta nke usoro Phenylpriracetam (Carphedon) (77472-70-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Phenylpiracetam (Carphedon) ntụ ntụ bụ isi Ihe:
aha: Phenylpiracetam (Carphedon) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C12H14N2O2
Molekụla arọ: 218.25
agba: White ma ọ bụ na-acha ọcha uzuzu
Phenylpiracetam (Carphedon) ntụ ntụ na steroid steroid
Phenylpiracetam ntụ ntụ, Phenotropil ntụ ntụ, Carphedon ntụ ntụ
phenylpiracetam ntụ ntụ Usage:
Ụdị ụdị nke phenylpiracetam powderranges sitere na 100-200 mg kwa dose, were ya ugboro atọ n'ụbọchị. N'ihi mmetụta ndị nwere ike, ọ na-atụ aro ka ịmalite na njedebe dị ala nke usoro dịgasị iche ma na-abawanye ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
A na - akọ ka enwere ntachi na phenylpiracetam ntụ ntụ na - eto ngwa ngwa. Ya mere, a gaghị agwa gị ka ị were ya dị ka mgbakwunye kwa ụbọchị kamakwa dị ka ngwá ọrụ iji mee ka ike gị dịkwuo mkpa mgbe ịchọrọ ya kachasị ma ọ bụ iji mee ya ka ọ bụrụ oge ọ bụla.
Ọtụtụ ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ nwee nsogbu na-eme ka ndị mmadụ nwee obi iru ala, nchegbu na mgbakasị ruo n'ókè ụfọdụ. Ọ bụ ezie na ntụpọ Carphedon nwere ike ime ka mmetụta ndị a pụta, ha na-agbanyeghị na mmeju a karịa ka ndị ọzọ na-akpali akpali. Carphedon ntụ ntụ ma ọ bụ Phenylpiracetam ntụ ntụ nwere ike ime ka nchekwube ma nwekwuo ikike ịchọpụta ihe na enweghi mmetụta dị ole na ole karịa ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-akpali akpali.
A na-ewere Carphedon ntụ ntụ na Oxiracetam dịka ndị na-akpali akpali nke abụọ nke ezinụlọ racetam ma ha abụọ bụ nhọrọ dị oke mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye anya.
Kedu Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịmanya Anya na Phenylpiracetam ntụ ntụ?
Phenylpiracetam ntụ ntụ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke dị na ahịa taa. Ọ bụ ihe ọhụrụ nootropic sitere n'aka ezinụlọ racetam ma bụrụ nsụgharị nke nsụgharị piratetam nootropic mbụ, ma ọ bụrụ na a na-eme atụmatụ na ọ bụ 30 ka 60 ugboro dị ike karị, nwee ezigbo ngwaahịa na-adịghị mma, ma na-eme ka arụ ọrụ ahụ dịkwuo mma. Maka ihe ndị a nile, phenylpiracetam ntụ ntụ na-esiwanye ngwa ngwa n'etiti ndị ọrụ na-adịghị.
Ngwurugwu, phenylpiracetam ntụ ntụ bụ ezigbo piracetam na mkpụrụ phenyl dị na ya. Nke ahụ na-eme ka ọ dị nnọọ ka piracetam, nne na nna ya, mana mgbakwunye nke phenyl otu ahụ na-eme ka ọ dịkwuo ụzọ abụọ:
1. Ike na - enwekwu ike na mmetụta siri ike site na ikwe ka ngwongwo ahụ na-eme ka ọnyà ụbụrụ (BBB) ​​dị mfe.
2. Energizing - Mmetụta ndị ọzọ na-akpali akpali n'ihi na o yiri ka ihe phenethylamine yiri, dị ka Adderall.
Tụnyere ndị ọzọ racetams, phenylpiracetam ntụ ntụ bụ nnọọ ike ma nwere nnukwu bioavailability ọbụna mgbe ingested ọnụ. Ọkara ndụ ya gburugburu 3-5 awa n'ime ụmụ mmadụ.
Ịdọ aka ná ntị na (Carphedon ntụ ntụ) Phenylpiracetam ntụ ntụ:
Dị ka ndị ọzọ nootropics nọ na racetam klas, enwere mmetụta ole na ole sitere na supplementing phenylpiracetam ntụ ntụ mgbe e mere ya na ndọtị ndị a tụrụ aro. Ọ bụrụ na ị na-enwe isi ọwụwa, ọ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na ị ga-agbakwunye ma ọ bụ bidowanye ihe nkwado gị, bụ nke a na-atụkarị aro mgbe ị na-ewere racetams.
Phenylpiracetam ntụ ntụ na-abawanye ebe nchekwa na mkpokọta cognition dị irè karia piracetam, na-echebe ụbụrụ, a kọwawokwa ya iji mee ka arụ ọrụ ahụ dịkwuo mma. Phenylpiracetam ntụ ntụ bụ nnukwu mgbakwunye na mkpokọta nootropic n'ihi mmetụta ya na ọdịdị dị mma. N'ụzọ doro anya, ndị na-eme egwuregwu na ụmụ akwụkwọ nwere ike irite uru n'ihi ihe ndị na-akpali akpali ma na-akpali akpali. N'ikwu ya, ọ na - eme ka nchekasị dịkwuo njọ nke bụ ego bara uru.
Phineylpiracetam ntụ ntụ ka enyela ndị agha Russia na ndị na-eme njem nlekọta maka ikike ya iji welie arụ ọrụ nke uche na ahụ.
Na ọmụmụ ihe, phenylpiracetam ntụ ntụ egosiwo mmetụta ndị a.
Mee ka nchekwa dị mma, ntụgharị uche, na ngwọta nsogbu na ndị ọrịa nwere asthenia.
Mee ka locomotor na ọrụ antidepressant ma melite ebe nchekwa na oke.
E gosipụtara iji gbochie ma belata mmetụta nke Amnesia.
Inwe ike igbochi nchekasị na egwu nzaghachi na oke na-eme ka nrụgide ghara ịmalite.
Edere ya iji belata mmetụta nke ụra efu maka oge nke ọtụtụ ndị ọrụ.
Na-ebelata mmetụta nke oyi na ahụ anyị site na ịba ụba na ndidi.
Maka ịmụ na ịmụ
Uru nke phenylpiracetam ntụ ntụ dịcha uru maka ịmụ na mmụta. Ebumnobi na-akpali akpali ya dị ukwuu maka nnọkọ ụra na-ehighị ụra, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-elekwasị anya na ya, maọbụ na ọ bụ ihe mmụba nke ọmụmụ mmụcha zuru oke. Mmetụta ya na ebe nchekwa na-enye ohere maka mmelite zuru ezu. Mkpali na mmelite obi na-enye ohere maka ọmụmụ ihe ka mma. N'ikpeazụ, ike ya iji belata mmetụta nke nrụgide na nchekasị kwesịrị ikwe ka ịmụtakwu ihe na nrụgide.
Maka ndị egwuregwu
Phenylpiracetam ntụ ntụ dịkwa oke mma maka ịrụ ọrụ na ịrụ ọrụ egwuregwu. Ọ na-ebelata mmetụta na-adịghị mma nke nrụgide na ahụike gị, bụ nke bara uru maka onye na-eme egwuregwu, ume na-arịwanye elu, mgbake, na ntachi obi. Nke a na-enwewanye nchekasị na-agụnye ịba ụba nke ahụ gị na oyi.
Phenylpiracetam ntụ ntụ na-enyekwa ike yiri nke amphetamine. Ọcha, elekwasị anya, ume ike na-enweghị caffeine jitters dị mma na ụlọ ọrụ iji nyere aka bulie arụmọrụ gị n'oge arụmọrụ ma ọ bụ asọmpi. E nwekwara obere ihe ọ bụla, ọbụna ma e jiri ya tụnyere caffeine.
Ndị na-eme egwuregwu kwesịrị ileba anya na phenylpiracetam ntụ ntụ dị na ndepụta nke ihe ndị a machibidoro iwu nke World Anti-Doping ma kpebie ihe ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ phenylpiracetam.
KWESỊRỤ ntụ ntụ VS. PIRACETAM ntụ ntụ
Ọdịdị nke Carphedon dị nnọọ ka Piracetam na ha abụọ fọrọ nke nta ka 100% enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ọnụ ha ka ha na-enwe ọkara ndụ. Ntak emi Carphedon (Phenylpiracetam) uzuzu weere na ọ ga-aka mma maka piracetam?
A na-ewere na ntụpọ Carphedon dị ka oge 60 dị ike karịa piracetam, nke pụtara na ọ na-ewe obere ihe dị na Carphedon ntụpụ iji hụ nsonaazụ. Nke a apụtaghị na ị ga-eji ihe dị elu nke Piracetam nye otu ihe ahụ dị ka Carphedon ntụ. N'ezie, ịnweta ihe ndị ọzọ Piracetam ga-enye nsonaazụ na-abaghị uru mgbe ụfọdụ gasịrị, mana ọ ga-eme ka ohere ị ga-enwe nweta mmetụta dịkwuo ukwuu.
The phenyl group added to Piracetam to create Carphedon powder allows it to have a broad range of effects and makes it more efficient in sharpening focus and improving the reaction times.
KWESỊRỤ ntụ ntụ VS. NOOPEPT ntụ ntụ
Ọ na-esiri ike iji mmanụ ntụ ọka Carphedon tụnyere Noopept n'ihi na ha bụ ihe dị iche iche dị iche iche na uru na nkwonkwo ha. Ọ dabere na ụbụrụ onye ọ bụla na otú o si emetụta gị.
A na-ele Noopept anya dịka oge 1,000 dị ike karịa Piracetam, ma ọ bụ na ntụpọ nke na-adịghị na Carphedon ka oge 60. Nke a pụtara na ọ na-ewelata ya iji nye nsonaazụ, ma ọ bụrụ na enweghị mmetụta ndị ị na-achọ, ọ gaghị emetụta otú o si dị ike.
Noopept na Carphedon ntụ ntụ nwere ike inwe ndidi na-ewuli elu. Enweghi otutu omumu na-atụle ihe abuo abuo, ya mere o siri ike isite na nkwubi okwu nke onwe ya.
KWESỊRỤ ntụ ntụ VS. PRAMIRACETAM ntụ ntụ
Nke a bụ ihe abụọ nootropic nwere ike iji tụnyere. A maara nke ọma dị ka ọmụmụ nootropic, nke ọzọ bụ ihe ga-eme ka nlezianya anya. Ha abụọ bụ ndị a maara nke ọma n'etiti ndị ọrụ nootropics ma ha abụọ nọ n'akụkụ ọnụ.
Akuko ndị ọrụ na Carphedon ntụ ntụ na mmetụta Phenylpiracetam nwere ntụ ntụ dịgasị iche iche. Ndị ọrụ ụfọdụ na-akọ na ị hụrụ nsonaazụ dị ike. Ndị ọrụ ndị ọzọ na-ekwu na ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ka njọ, na ọ na-eme ka ike gwụrụ ha na ụbụrụ ha na-eche echiche. Lelee ntuziaka anyị niile n'ụzọ kachasị mma iji wepụ Phenylpiracetam ntụ ntụ.
Ndị na-arụ ọrụ na Carphedon dị ka ndị na-arụ ọrụ ugbo yiri ka ọ na-ewuli elu ngwa ngwa ngwa ngwa, na ụfọdụ n'ime ụbọchị ole na ole. Dabere na akụkọ, ogologo oge ọ na-ewe iji kwalite ndidi yiri ka ọ bụ enweghị atụ. Ọ ga-ekwe omume na akụkụ nke ihe kpatara njedebe nke ndị ọrụ na-ekwu bụ na ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-ere uzuzu Carphedon.
N'aka nke ọzọ, Pramiracetam yiri ka ọ na-enye ndị ọrụ ọtụtụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi. Emere Pramiracetam ọtụtụ afọ n'ihu Carphedon uzuzu, ma gosipụta onwe ya n'etiti mba ndị ọzọ. N'ezie, ụfọdụ nsogbu ndị nwere na Carphedon ntụ nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu ndị na-ebu sopụta. Ugbu a ka ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọtakwu ya na ịrịọ maka ya, ndị ahịa na-ere ahịa nootropic na-amalite ịmalite ya.
Nye ma ọ bụ Carfedon ntụ ntụ na Pramiracetam a na-agbalị, dị nnọọ ijide n'aka na ị na-azụ site n'aka onye nkesa a ma ama ka ị mara na ị na-enweta ngwaahịa dị elu. Ị nwere ike ịkwụsị ịhọrọ onye nke ọzọ, ma ọ bụ ị nwere ike ịmalite iji ma ma na-agba n'etiti abụọ ahụ iji zere iwuli elu. Chọta ezigbo nchịkọta iji nye gị ihe ị chọrọ.
Phenylpiracetam Ntụ ntụ ntụ:
Phenylpiracetam ntụ ntụ Marketing:
Esi zụta Carphedon ntụ ntụ: ịzụta Phenylpiracetam ntụ ntụ si AASraw?